ज्योति मगरमाथि दुर्व्यवहार,यसरी मुस्किलले जोगिइन् - Khabar Break | Khabar Break
ज्योति मगरमाथि दुर्व्यवहार,यसरी मुस्किलले जोगिइन्
स्टेज कार्यक्रममा निकै व्यस्त गायिका तथा मोडल ज्योति मगर हिजोआज निकै तनावमा छिन् । स्टेज कार्यक्रमका लागि देश–विदेशमा जाने क्रममा पटक–पटक विभिन्न आयोजक तथा व्यक्तिले आफूविरुद्ध दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास गरेको ज्योति बताउँछिन् । यही साता ज्योति दुई स्थानमा नराम्रोसँग फसिन् ।
चितवनस्थित गैंडाकोटमा एक क्लबले आयोजना गरेको साँस्कृतिक कार्यक्रम सकिएपछि साँझ आयोजकमध्येका एक सदस्यले खानासँगै खाने भन्दै उनलाई होटलमा पुर्‍याए ।
होटलको खुला ठाउँमा खाना खाने इच्छा राखेकी ज्योतिलाई तपाईं सेलिब्रेटी जस्तो मान्छे खुला ठाउँमा भन्दा सेक्रेट ठाउँमा खाना खानुस् भन्दै बस्ने कोठामै खाना पुर्‍याइदिन होटल स्टाफलाई आग्रह गरे ।
ज्योति पनि आफू बस्ने कोठामै खाना आउने भएपछि मख्ख भइन् अनि ती व्यक्तिको आग्रह सहर्ष स्वीकारिन् । एकैछिन गफ गर्ने भन्दै आफूसँगै कोठामा छिरेका ती व्यक्तिले रातको ११ बजेसम्म कोठा नछोडेपछि ज्योतिले प्रहरीको सहारा लिएर उनलाई कोठाबाट निकालेकी थिइन् ।
सांस्कृतिक कार्यक्रमपछि आफ्नो होटल भ्यु टावरको कोठामा पुगेकी ज्योतिलाई रातको २ बजे होटलका सञ्चालकले निरन्तर कोठा खोल्न आग्रह गरेपछि उनले ढोका खोलिन् । मस्त निद्रामा रहेकी ज्योतिले अन्ततस् फेसबुकमा लाइभ गर्दै ती सञ्चालकलाई तुरुन्त कोठाबाट निस्कन आग्रह गरिन् ।
लाइभ गरिरहेको थाहा पाएपछि ती व्यक्ति होटलबाट निस्किएका थिए । ज्योतिले निरन्तर यस्तो खालको दुव्र्यवहारका कारण आफू मानसिक तनावमा परेको बताएकी छिन् । यो खबर कान्तिपुर साप्ताहिकमा छ ।
बलिउडमा कैटरिनाका १६ वर्षः कति सफल, कति असफल?
हृत्तिक र टाइगर अभिनीत फिल्म ‘वार’को टीजर सार्वजनिक (भिडियो सहित)
मकवानपुरे अभिनेत्री नीताले चलचित्र अवार्ड नपाएपछि पोखिन आक्रोश
को हुन् भद्रगोलकी मुन्नी ? (फोटोफिचर)
‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार’विपिन र स्वस्तिमालाई
नीता ढुंगाना अभिनीत फिल्म ‘साइनो’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक
सुरक्षामा आँच नपुर्याउने ओझाको प्रतिबद्धतासंगै शिल्पा र छविबीच सहमति
नेपाली चेली निकिता थापामगरले जितिन् ‘मिस टीन भारत’ को उपाधि